Caruur Cudurka Jadeecada ugu geeriyooday Deegaano ku yaala Gobolka Gedo – SBC
Caruur Cudurka Jadeecada ugu geeriyooday Deegaano ku yaala Gobolka Gedo
Posted by Webmaster on January 16, 2012 Comments
Degmooyin ka tirsan Gobolka Gedo ayaa laga soo sheegayaa in ay ku geeriyoodeen ku dhowaad 10 caruur ah oo sida la sheegay uu soo ritay Cudurka looyaqaan Jadeecada.
Sida ay xaqiijiyeen saraakiisha Caafimaadka ee Gobolka Gedo in ka badan 8 caruur ah ayaa lagu aasay gudaha degmada Baardheere ee gobolka Gedo kuwaas oo dhamaantood ay u geeriyoodeen cudurka Jadeecada oo faro ba’an ku haya deegaanka.
Ibraahim Isaaq Madaxa qeynta Caafimaadka ee Ururka bisha Cas ee gobolka Gedo ayaa SBC u sheegay in caruurtaasi ay u geeriyoodeen cudurkan jadeecada islamarkaana uu soo ritay tiro kale oo aad u tiro badan oo ku sugan deegaanka .
Waxa uu intaasi ku daray Ibraahin in Caruurtani ay u dhinteen cudurkaas inta aan la soo gaarsiinin goobaha caafinaadka ee gobolka .
Sidoo kale waxa uu sheegay in dhibaatooyinka caafimaad ee soo wajahay Caruurta ay si baahsan uga jiraan deegaanada Miyiga ah ee ka fog Magaalooyinka, uuna fara ba’an ku hayo Cudurkan Jadeecada,
Sikastaba ha ahatee ma ahan markii ugu horeysay oo ay Caruur sidan oo kale ugu geeriyoodaan gobolka Cudurka Jadeecada iyadoona cudurkan uu yahay kan ugu daran ee gobolka Gedo sida baahsan uga jira maadaama aanay caruurta uu ku dhaco helin adeegyadii caafimaad ee talaalka looga hortagi lahaa.
C.Khadar Maxamed Siraad
SBC Interntaional Gedo.